Nhau - Shanyira & tarisa maikorosikopu mhando isati yatumirwa kuDenmark mutengi kodhi muna 2019.
Opto-Edu ane mutana wekare kubva kuDenmark kweanopfuura makore gumi nemashanu, achiraira anopfuura makumi matatu maikorosikopu mhando kwenguva yakareba, kutengesa vhoriyamu pamusoro pe1000 kusvika 1500 pcs gore rega.
Kunyangwe yega yega odha haina kukura zvakanyanya, asi sezvo zvaisanganisira akawanda mamodheru, mutengi ane zvakawanda zvakadzama zvinodiwa kubva kune logo kudhinda, pendi ruvara, kurongedza makatoni kune mhando yekutarisa. Mushure mekutumirwa kwega kwega kwasvika, mutengi anozotumira rondedzero yemhinduro, akataura kuti mapoinzi ese anoda kuvandudzwa mune zvirevo zvemangwana Mutengi anotarisira kuti mazhinji ematambudziko anogona kuongororwa & kugadziriswa isati yatumirwa mufekitori yaOpto-Edu, kuve nechokwadi kuti maikorosikopu avakagamuchira akagadzirwa zvakanaka uye akarongedzwa, vanogona kutengesa maikorosikopu pasina rakawandisa basa uye nguva yakashandiswa pakuongorora.
Kusangana nechinodiwa ichi, Opto-Edu akagadzira akawanda magwaro ekudzora mhando, achikurukura nefekitori chiso nechiso nguva zhinji, akaedza kuve nechokwadi chekuti poindi yega yega yakaongororwa musati yatumirwa. Opto-Edu atumira vanhu vavo vakasara mufekitori kuti vatevedze kugadzirwa, pasuru uye kuongorora. Chekupedzisira isu tichaita yedu yekuongorora zvinoenderana neyese yevatengi ruzivo rwezvinodiwa.
Nenzira iyi, Opto-Edu akagadza mhando sisitimu nenzira yavo, kusangana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro kubva kumutengi. Kune vatengi vakuru uye vanokosha, Opto-Edu inopa ino yepamusoro yekutarisa sevhisi kuchengetedza rubatsiro rwevatengi, zvakare kuhwina musika weOpto-Edu brand.
Seimwe yevatengesi vane hunyanzvi mumakorosikopu munda muChina, isu tine anopfuura mazana mashanu emamodeli mune yedu yekugovera renji, kune yega yega application & zvinodiwa, tinogona kusarudza & kukurudzira 1-3 yakanaka maikorosikopu kubva kuChina musika wevatengi vedu. Isu tinokuvimbisa kuti iwe unowana iyo YAKANAKA YAKASARUDZWA microscope kune kwako kudiwa!
Makore matatu mhando garandi!
Kana uine mumwe mubvunzo, tinyorera meseji kwatiri izvozvi, isu tinosangana nekuonana mumaawa makumi maviri nemana!